Ngesinye isikhathi, kwesinye Hollywood omkhulu wamabhayisikobho ashisa izikhotha ke senza indaba mayelana nendlela Emhlabeni nezinxushunxushu (intandokazi isihloko abenzi mafilimu American), kanye yempilo yansukuzonke zabantu wanyamalala zonke izinto zokususa amabala. Ngisho imoto kwakuyilungelo iqembu elibusayo ...
izibukeli Kuleli qophelo, ngiqinisekile eziningi esengqongqoza kathathu ukhuni cam ... Futhi akulona ize, ngoba ithuluzi elikhangayo besifazane abaningi wobulili fair kumane Irreplaceable.
Ekhuluma ngalo, lokho kuyinto kakhulu imoto engcono?
abakhiqizi Modern yokuwasha ukunikela anhlobonhlobo ka amashampu izinwele: soft, ukusetshenziswa nsuku zonke, dandruff, ikhuthaza ngalapho izinwele zikhula zibheke nombala nokugcinwa, kanye nabanye abaningi. Kunengqondo, uyini nobunzima? Kufanele kube lula ukukhetha igama efanelekayo, bese uqale ukusebenzisa ithuluzi.
Nokho, ngo-umkhuba, izinto eziyinkimbinkimbi kakhulu kangakanani: amashampu abaningi musa ukuhlangabezana nezidingo ezishiwo, abanye ohlengwe abanye, kodwa avuse nezinye izinkinga, futhi ngicabange njengamanje amathuluzi kuhlanganiswe ngokugcwele, okuyinto zilethwe kanye zonke izinkinga.
Ngokuvamile, imoto engcono njalo ekhetha yena, esekelwe izinto ngokombono womuntu siqu kanye nezidingo. Kulesi sihloko thina uyonika amathiphu mayelana nendlela yokuthuthukisa izindlela zayo ukuze ugeze izinwele zakho, ukujwayela it ukuze ivumelane izidingo zakho.
Senkampani "Tesco" inhlolovo ezikhathini zamuva. Imiphumela umxhwele: ngokuvumelana iningi lezakhamuzi UK, umnikazi enhle kunazo izinwele okuthiwa actress Jennifer Aniston. Iyini imfihlo ye ubuhle bayo? It kuvela ukuthi lo imoto kangcono izinwele (ngokubona actress) - nguye is doped ungabuqeda nge aspirin ezimbili ochotshoziwe (ngesilinganiso 2 amaphilisi ibhodlela ngayinye). Kumele waxwayisa ukuthi le iresiphi asifanele izinwele ezinemibala.
I imoto kangcono ukunakekela izinwele ezinemibala, ngesisekelo izinkulumo Inengi labahlanganyeli ezithangamini kumasayithi zabesifazane - kuyinto isikhuphasha neqanda. Kuye ubude izinwele ukungezwa inani amaqanda izindlela ingahluka, abanye belulekwa ukuba babiza izikhupha futhi ezimbili amathisipuni lwesinaphi. Nokho, nazi izindlela ezikahle ukuhlola ngamunye. Laziest bathi kwanele engeza izikhupha efanayo imoto ngokushesha ngaphambi ukugeza ikhanda.
Ngokusho edumile French Letitsii Kasta, ikhambi kangcono izinwele, ivikela ngokuphelele kusukela dandruff - imoto is kulekelelwa 30 amaphilisi aspirin encibilikayo. Kungokufanayo iresiphi aluleka futhi imodeli American Claudia Schiffer.
Abesifazane abaningi akhononde iqothukile. isimo esinjalo kubhekwa evamile uma kwenzeka off-inkathi (entwasahlobo noma ukuwa), futhi uma inani izinwele elahlekile akuyona engaphezu kwekhulu ngosuku. Kwezinye izimo - iyinkinga kubangelwa ukushintsha kwama-hormone (isib emva kokubeletha), isidingo amavithamini, nokunakekela ngokuvamile okungafanele (ukuhlukunyezwa udayi zamakhemikhali, ukwelashwa ukushisa ezivamile). Kulo mBhalo, isimo okukhonjiwe, okuyiwona A ukusetshenziswa eyanele izinwele okubuyisela imaski kabili ngesonto, kanye ngokukhalipha ukukhetha ithuluzi esifanele ukunakekelwa nsuku zonke.
Kuyinto imoto kangcono izinwele ukukhula - lokhu imoto okuzenzela. Indlela ulula: ukuze insipho ezisekelwe add umhluzi sembabazane kanye chamomile. Kuyinto lezi amakhambi kusebenze izinwele ukukhula kanye nokuqinisa follicle izinwele. Njengoba lokhu nohlaka uphelele oqoshiwe ogayiwe ingane insipho.
Ekugcineni sifisa bonke abantu besifazane: unakekele izinwele zakho, Holte nokwazisa kubo! Hairstyle - Imfanelo ebalulekile ubuhle besifazane nezinwele shiny enempilo - inkomba yokuthi intsha nangamandla.
Ubuthi ezinamandla kakhulu futhi imithombo yayo
I-Miracle-shovel "Umlimi" - izici nezici
Kangakanani esikhundleni ikhava valve gasket